Ubuntu, Fedora ary ny Stuffy Distro | Avy amin'ny Linux
Ubuntu, Fedora, ary ny Stuffy Distro
Chema | | Fisehoana / personalization, Fitsinjarana, GNU / Linux
Aorian'ny fametrahana Ubuntu 12.10 amin'ny solosainako hizaha toetra ny tsimbadika Unity nohavaozina ary hanamarina fa milamina izany (tsy nahantona ahy tao anatin'ny 1 herinandro), ary ny plugin Compiz izay misolo toerana Gnome-Shell en Ubuntu Raha ny tena izy dia hitako ny birao izay tsy mifanaraka amin'ny fomba fiasako, ary ny ratsy indrindra dia ny sainan'i GNU / Linux ho an'ny ankamaroan'ny mpikambana vaovao amin'ny tontolo iainana i Linux.
Misy andiana soatoavina etika eo amin'ny fampandrosoana ny GNU / Linux izay mihoatra ny fahalalahana, toy ny fanaovana olona maro kokoa afaka mampiasa rindrambaiko maimaimpoana raha tiany.
Ary eny, azontsika atao ny mampiseho azy ireo ny kioba birao na ny effets manokana heverin'izy ireo fa avy any Matrix, saingy tsy afaka ny hanao ny asako isan'andro, ny mpampiasa interface dia mampiasa 130 mb ram (Compiz aorian'ny ora maro nampiasaina) ary mahatonga ahy ho fako midika hoe.
Ankoatr'izay ara-teknika Ubuntu tampina GNOME amin'ny fetra izay tsy azoko hazavaina. Izay no antony tsy fitondran-tenany Unity mankany amin'ny distro hafa, satria ny fizarana azy io dia miasa Unity y Gnome-Shell asa mafy izany. Ubuntu mametaka na dia ireo tranomboky GTK (Gnome Graphical Interface Base) mitovy ihany aza izy ary tsy mandaitra na mandaitra.
Ka mieritreritra aho fa Fedora mampiseho fihetsika misokatra kokoa ary mety hanampy kokoa, saingy Gnome-Shell Is a Unity Tsotra kokoa, ny RAM dia voasokitra ihany koa amin'ny vokatra manokana, ankoatry ny zava-misy fa ao amin'ny Fedora 18 dia nisy installer iray tafiditra ao amin'ny fanjakana alpha, saingy tantara hafa izany.
Ary raha tsy misy mariky ny fanarenana avy amin'ny GNOME dia misy ny anarany Qt, KDE SC, izay azo ovaina ary tsy manery anao hampiasa azy io, fa kosa mieritreritra ianao fa tsy fifehezana ary aiza no tokony hamboariko ny zavatra, satria afaka mahazo anao.
Saingy afaka manafoana ny effets aho, na ny fikarohana semantic (Nepomuk). Aza terena ny tenanao, asa kanto io ary manana tombony lehibe, saingy tsy azo atao ny manana birao mamokatra amin'ny rafitra fiasa penguin raha tsy misy fampiharana GTK, toy ny Firefox, Gimp, Inkscape, ny fanatsarana tsy misy fisalasalana, na mafy toy inona aza ny tetikasa iray izay manome lanja indrindra ahy amin'ny rindrambaiko maimaimpoana, manandrana ny fizarana Chakra-Linux.
Tonga tamin'ity famaranana ity aho, GNOME Tsy eto izy na antenaina fa mandeha mamaky ny tany efitra izy ary toa tsy mahita ny fivoahana mankany amin'ny labyrint izay nidirany. KDE SC tsikelikely izy io dia mandray ny anjara asan'ny GNOME 2 ary mandritra izany fotoana izany, mihatsara tsikelikely ny fizarana, fa matotra ny fisarahana.
Ubuntu manana ny installer tsara indrindra, Debian no milamina indrindra, Fedora ilay manavao indrindra ary eto dia miseho ilay distro miafina izay tsy raharahi'ny maro ary izany no référence talohan'ny mpivady Ubuntu-GNOME 2: Mageia, izay mahafeno ny fepetra takiana aminy ary mitazona traikefa nahafinaritra an'ny mpampiasa hatrany noho ny KDE.
Raha ny fanazavana, io no distro tokana fantatro momba izany izay mamoaka kinova miaraka amin'ny fahasamihafana tadiavin'ny linuxer, iray volana na miakatra iray volana. Hanokana lahatsoratra iray hafa aho hiresaka momba an'i Mageia, ilay majia miafina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Ubuntu, Fedora, ary ny Stuffy Distro
57 hevitra, avelao ny anao
Luis Mauricio dia hoy izy:
Hatramin'ny nanombohana ny gnome 3 dia tena nahatsapa ho kamboty aho ho mpampiasa farany hatramin'ny nampiasako ny Ubuntu nanomboka tamin'ny andiany 8.10 ary rehefa niaraka tamin'io famosaviana Unity io izy ireo, toa tsara tamiko sy izay rehetra novolavolain'izy ireo ary nanana ny toetrany manokana, mbola mitodika any amin'ny ankavia kokoa satria tanana ankavia aho, na izany aza, tsy maintsy nifanaraka tamin'i Kde aho noho ny antony famokarana ary, fiovan'ny filôzôfia tena mifantoka amin'ny efijery mikasika izany, rehefa manana All in One miaraka amin'ny Touch Screen aho, angamba ho safidy tsara.
Etsy ankilany, ny asa fizarana tsara miaraka amin'i Kde dia tsy asa mora, Opensuse dia distro tena tsara amin'ny halavan'ny Alemanina, fa ny Kde kosa dia mavesatra be, ary miankina betsaka amin'i Yast ny manao ny zavatra rehetra, ny Chakra dia mpanafika amin'ny fampiasana Tranomboky Gtk, ka tao anatin'izay andro vitsivitsy izay nanesoran'i Canonical an'i Kubuntu ary ny tovolahy tao amin'ny Blue Systems no naka izany, Kubuntu no lasa zaraiko. Milamina, haingana ary mahery vaika amin'ny alàlan'ny tahiry fampiharana tsara indrindra izay atolotry Ubuntu anao, ny hafa hamela ahy fa tokony ekena fa io no feno indrindra.
Saingy rehefa naneho hevitra tao izy ireo, amin'ny faran'ny andro dia mampiasa ny kernel Gnu / Linux isika rehetra, tsy tokony hametraka ny tenantsika amin'ireo finoana mahery fihetsika ireo eo amin'ny fizarana manokana, ny tena mety hitranga dia ny mahazo hopping distro ianao ary tsara izany tantara hafa io.
Valiny tamin'i Luis Mauricio
Tena mahaliana, manaiky aho. Na dia tsy dia liana loatra amin'i Mageia aza aho. Ary araka ny filazan'izy ireo fa misy fitaovana hanatsarana ny fampidirana ireo fampiharana GTK ao amin'ny KDE, dia tsy mitovy izany.
Ny zava-drehetra dia resaka tsiro. Ankehitriny, raha te hanome tontolo iainana toa an'i Gnome2 ny mpampiasa aho dia tsy hiaraka amin'i KDE izany fa miaraka amin'i Xfce. 😉
Toy ny mahazatra an'ireo lahatsoratra ireo eo amin'ny birao birao dia tonga amin'ilay zavatra iray ihany: resaka tsiro io.
Ankehitriny, mino aho fa ny safidy tsara indrindra ahazoana birao karazana Gnome 2 dia, mihoatra ny Xfce, LXDE, izay miasa ihany koa ary mandany loharano vitsivitsy.
Eny, LXDE dia safidy tena tsara, saingy tsy misy zavatra ananan'i Xfce ... fa araka ny filazanao azy, resaka tsiro 😀
Ferran dia hoy izy:
Ubuntu, fantatry ny rehetra fa tsy demokrasia izy io, ary raha ao Ubuntu ianao dia alao am-pahatokiana izay aseho. Miasa tsara amin'ny FedE ny Fedora, fa mandeha ihany koa amin'ny gnome3, tsara ny Fedora amin'ny Xfce, andramo izany, omeko anao izany. Mageia, toa miadana be izy amiko, miaraka amin'i kde. mahafaly
Valiny tamin'i Ferran
Indraindray toa tsy mandeha amin'ny laoniny ny zava-drehetra. Araka ny nolazaiko rehefa nanoratra aho "Aiza no alehantsika amin'ny latabatra maoderina?", Dia hanana fotoan-tsarotra isika.
Na izany na tsy izany, nampiasa elementOSOS nandritra ny andro vitsivitsy aho ary tiako izany. Tsy dia be loatra amin'ny lafiny akorandriaka, fa miaraka amin'ireo rindranasa noforonina tsara ka manana iray izy ireo dia tsy afaka mitaraina. Manana HIG tena zava-misy sy azo ampiasaina izy ireo.
KDE. Ilaina tokoa ny KDE. Ary raha mila browser ianao dia ampiasao Konqueror, miaraka amin'ny Webkit. Io no tsara indrindra, na dia misy endrika aza miraikitra amin'ny taloha raha ny momba ny fitetezana.
Hitako foana fa manana paikady tsara i Ubuntu, sary efatra ho an'ny mombamomba ny fitaovana sy ny tombontsoan'ny mpampiasa efatra:
- Ubuntu: Mombamomba ny Hardware / Basic User Tsara
- Kubuntu: Mombamomba ny mpampiasa / ny Hardware / Power tsara, izay tia manaingo azy
- Xubuntu: Mombamomba ny mpampiasa / ny nostalgic, endrika W95
- Lubuntu: Mombamomba ny Bad / Nostalgic / Advanced User Profile
Mijanona ho an'i Bhodi Linux (Ubuntu With E17) fotsiny izy ho lasa iray amin'ireo sary ofisialy Ubuntu (Ebuntu?)
krel dia hoy izy:
Tsy haiko raha azoko tsara, ny gnome-shell dia miasa kokoa noho ny Unity !!! Wuala, izay nesorinao tamin'ny tananao, azo antoka fa izay ilainao amin'ny birao dia tsy mifanakaiky amin'izay ilaiko akory. Tamin'ny andro iray hafa dia nametraka Android tao amin'ny Virtualbox aho ary miasa kokoa amin'ny desktop mihoatra ny gnome-shell.
Nampiasa ny Fedora 17 aho ary nahafinaritra ny traikefa nandritra ny faharetany. Ity kinova ity dia namela tsiro ratsy teo am-bavako, installer tsy dia manondro be loatra, raha tsy mitandrina ianao dia manafatra ny fizarazaran-fizarazarana, SElinux tsy afaka mitondra.
Gnome-shel 3.4 taorian'ny asa mafy dia navelako ho an'ny filako, ary amin'ity no ilazako fa ny lisitra windows-list dia takiana isa 1. Miaraka amin'ny 3.6 ny ankamaroan'ny fanitarana izay zatra nampiasaiko dia tsy novaina Farany, ny ampahany lehibe dia natokana ho an'ny antoko fahatelo. Ary ny tracker, tamin'ny 3.4 dia azo fehezina, amin'ny 3.6 dia zaza simba….
Kanelina, andriamanitro, noho ny maha-izy azy, tsy mendrika izany.
Ary izany no fomba fandehan'ny raharaha, na tiana na tsia, ny zavatra mendrika indrindra ao amin'ny gtk dia ny firaisana.
Ho an'ny ambiny, kde dia mihoatra ny fako rehetra amin'ny kaody tsy misy fotony izay ateraka manodidina ny gnome.
Mamelà ahy ny heloky ny vondrom-piarahamonina drake fa mila fitoniana bebe kokoa ny Mageia 2, io ilay distro mahazatra izay indray andro any satria mijanona tsy manomboka izy io, ao anatin'ny tontolon'ny asa dia mety hanome olana izany. Na izany aza tiako ny foto-kevitra momba ny foibe fanaraha-maso toa ny YaST (openuse), midera aho fa mitazona ny an'i Mandriva izy ireo. Tsy haiko raha manana foibe fanaraha-maso koa i PClinuxOS.
Tiako ny Mageia 3 hanao tsara kely kokoa, tokony holazaina fa ny Mageia 2 dia nivoaka tamin'ny fotoan-tsarotra teo amin'ny fampiharana ny systemd. Ny distros hafa dia mailo kokoa, ny openuse tara 12.2 volana maromaro.
Mamaly an'i krel
Sarotra be ny mamaritra tontolo tsara na distro. Ny zava-dehibe dia ny hamokatra. Ilaina koa anefa ny hatsarana.
Mampiasa XFCE amin'ny Gnome-Do sy Compiz aho (ary nieritreritra ny hanampy an'i Conky aho) ary marina fa mandany loharanon-karena bebe kokoa ireo mpanampy nefa koa mahomby kokoa amin'ny XFCE.
Raha ny fahitako azy, ny zavatra voalohany tokony harahina dia ny misafidy izay tontolon'ny birao mifanaraka amin'ny zavatra ilaintsika ary avy eo misafidy distro izay manome fanohanana tena tsara an'io tontolo iainana io ary manana programa mety indrindra ao amin'ny fitoeram-bokatra. ampiasainay, tsy maninona na havaozina farany na tsia izy ireo.
Mitovy hevitra aminao aho.
Miankina amin'ny distro ny fampiasana ny birao. Ohatra amin'ny Debian dia hitako fa nifanaraka kokoa tamin'ny gtk sy gnome, izay very ao amin'ny qt sy KDE. Counterpart openSUSE sy Chakra dia mety amin'ny qt sy KDE.
Na izany aza, Slackware sy Gentoo dia tonga lafatra amin'ny qt, gtk, ary KDE.
Ie, na dia manohana tontolo maro aza izy ireo, dia hahita "tianao" foana.
Raha ny marina dia tsy afaka milaza ianao fa tsara kokoa ny iray noho ny iray hafa, satria misy olona ho an'ny tsirairay amin'izy ireo.
Raha ny amiko, na dia mety tsy mino ahy aza ny sasany, ny Gnome-shell no namela ahy hamokatra bebe kokoa, ary ny antony eritreretiko dia ny tsy fanelingelenana ahy amin'ny "kojakoja" be loatra ary ahafahako mifantoka mora foana amin'ny asako.
Mampiasa XFCE aho fa ny MATE na ny fork of gnome2 araka ny itiavanao azy dia ilay birao mahazatra sy azo ovaina na aiza na aiza no jerenao, tsy fantatro hoe maninona ao amin'ny Linux no lany fotoana be amin'ny famoronana birao, rehefa efa noforonina ny zava-drehetra, dia toy ny hoe manomboka mivoaka ireo mpanara-maso. hexagonal na triangular, hahaha, hadalana ny manova ny écran rehefa efa misy modely miorina sy manara-penitra, izany hoe, mahitsizoro na toradroa. 🙂
Joules dia hoy izy:
Aza mieritreritra fa vita daholo izany. Elaela ny fotoana nilaina nohavaozina ny birao tahaka ny Windows, ary eto no isehoan'ny Gnome-Shell, manolotra tontolo madio sy mamokatra tsy misy fanelingelenana.
Ho ahy, izay avy any amin'ny KDE hatrizay, ny zavatra Gnome-Shell dia ilay fiovana nandrasako efa ela, ary nomena ny safidy, aleoko Gnome-Shell ary, raha tsy izany, Mate, birao tsara sy tsotra.
Valiny tamin'i Joules
F3niX dia hoy izy:
Tsy fahampian'ny fifehezana be loatra, fa tsy misy Xfce no safidy tsara indrindra ho an'ireo izay nampiasa Gnome2, tsy haiko hoe maninona no miady mafy ho an'ny Gnome-Shell izy ireo, aza raisina an-tsaina izany raha tsy tian'izy ireo izany. Mody mody fa mbola biraom-pampandrosoana mbola tsy nahita ny votoatin'ny birao ... .. ary i Kde no birao hajaina indrindra amin'izao fotoana izao, ENY, izy io no be mpampiasa indrindra, saingy manantena izy ireo fa tsy handany ny rindrambaiko 2013 fahatsiarovana, sady mampitombo ny fahitana anao sy ny fahaizanao.? Izay pc rehetra manomboka amin'ny 2004 ka hatramin'izao dia afaka mitazona fanjifana 300 ka hatramin'ny 400 mb (tsy misy fanatsarana izany, satria 150mb fotsiny no hainy).
Miarahaba anao, raiso fotsiny izay tianao ao misy tontolo iainana vitsivitsy hisafidianana.
Valiny amin'ny F3niX
devoly dia hoy izy:
Tena tsy fantatro raha momba ny Unity vs Gnome vs KDE, GTK vs Qt na Ubuntu vs Fedora ary ity Maeguia kely mahantra ity ity lahatsoratra ity izay tsy misy miraharaha, satria efa nanadino ilay chameleon ianao. (Mazava ho azy fa namboarina izy, tsy hitanao akory).
Ho an'ny ambiny, hevitra tsy mitombina, manokana ary somary feno pitsopitsony izay azon'ny olona iray rehefa mipetraka eo ambonin'ny seza fiasan-keramika, amin'ireny fotoana akaiky ireny ary matetika no eritreretin'ny olona kely ny zava-drehetra.
Valiny amin'ny devitroll
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho.
Tsy misy "Mageia kely mahantra" no faharoa ao amin'ny Distrowatch ao ambadiky ny MInt. Fantatro fa ny Distrowatch dia tsy ny refy marina, fa manamarika izany fa mpampiasa Linux maro no mitady fomba hafa hisolo ny "popus" kokoa, ary, raha ny hevitro, dia zava-misy tokony hikajiana ireo distro be izao.
Tsy misy mijery an'i Mageia, hoy izy! xD
Andraso ny hivoahan'ny kinova miorina ary ho hitanao ny fomba hiodinan'ny USERS (fa tsy ny mpamorona na ny mpankafy, mpampiasa farany fialan-tsasatra tsotra), indrindra amin'ny tolo-kevitry ny vava.
Gaga i Mageia noho ny fampiasana azy mora, nanomboka tamin'ny fametrahana azy izay ahafahanao misafidy izay hapetraka na tsy hialana amin'ny fisorohana rindrambaiko sy tranomboky marobe tsy ilaina (izay nampatsiahy ahy ilay OSuse taloha izay nitiavako ary nahatonga ahy hiroboka amin'ny tontolon'ny linux), avy eo ny fahamoran'ny fametrahana loharano sy rindrambaiko (tsy misy fahasamihafana be amin'ny distro hafa izay manamora ny fametahana rindrambaiko), sy ny lisitr'ireo rindrambaiko goavambe ao amin'ny trano fitahirizan'izy ireo, mitovy amin'ny by Arch.
Tsy afaka nanandrana an'i Mandriva mihitsy aho, fa raha io fomba fiasa io dia nanana an'io distro io, ary raha jerena fa ny ankamaroan'ny niara-niasa tamin'io dia miaraka amin'i Mageia izao, dia tsy ho gaga aho raha toa ka mamindra ny Ubuntu amin'ny isan'ny mpampiasa Linux vaovao tsy mpamorona. na ao anatin'ny tontolon'ny informatika.
Mitovy ny hevitro
Nandalo teto izy dia hoy izy:
Manana kde, gnome (akorandriaka) ary firaisan-kina amin'ny solosaina iray ihany aho ary amin'ny distro iray ihany, izay tsy ubuntu, tsy entin'ny ubuntu izany, ho an'ny exclusivité, saingy tsy olana ireo miasa telo ireo amin'ny solosaina iray ihany , indrindra miaraka amin'ireo fonosana ubuntu, izay mametraka ny anaran'ny distro ao anaty fonosana (mora kokoa ny misoroka azy ireo, na miala tsy hametraka azy ireo) ary ao amin'ny tontolo malalaka dia misy loharanom-baovao. amiko manana ny rss any aoriana (misaotra conky), ary na dia nikasika tontolo voaisy tile aza izany, ahafahanao mampiasa console na manolo ny bbrun amin'ny alt + f2 dia ampy ho ahy izany, ireo menus misy sokajy sy sokajy ao amin'ny Rehefa mandany fotoana izy ireo ary mankaleo, ny maha-azo ampiharina ny firaisan-kina, ary koa ny akorany mandeha amin'izany, miaraka amin'ny tsindry bokotra roa na telo, dia mamonjy fihetsiketsehana totozy be dia be ianao, fa rehefa eo amin'ny solosaina findainy no tsapanao
Heveriko fa tsikelikely dia miverina amin'ny fotony ny olona, ​​toy ny fony tsy nisy keyboard fotsiny fa tsy misy totozy dia misy asa manokana izay tsy ahafahana manao azy raha tsy misy totozy, fa ho an'ny asa tsotra dia azo ampiharina kokoa raha tsy misy ny totozy (na pad) , ary ny zavatra tsara dia tsy azo jerena ny hetsika (tetezamita), fa marihina ary ny tanjon'ity fanovana na fivoarana ity dia ny tontolo ivoho, izay isaky ny mahazatra kokoa ny maheno amin'ny foibe faneriterena 10 (rantsantanana 10). izay ahafahanao manana ny klavier sy ny fivezivezena (teboka sy teboka), araka izay azo atao.
zavatra toa ny foibe fanaraha-maso lozisialy, synaptika na mitovy aminy, manala kely ny fahasoavana sy ny fototr'izany hananganana sy hitantanana ny distro, zavatra toa ny urpmi, aptitude ary yaourt (izay ho ahy miaraka amin'ny -Syua no mandray ny loka, fa fa ny fanavaozana ny fahaiza-manaony && aptitude fanavaozana tanteraka), amin'ny alàlan'izy ireo dia azo ampiharina kokoa amin'ny hevitro izy ireo noho ny andianteny iray izay mametraka andiana fonosana sy tolo-kevitra mifototra amin'ny statistika, (satria tsy ampiasaina foana ny fitaovana tarihin'ny statistika izay nandefa mpampiasa hafa).
Tamin'ny fotoana voalohany nikasihako ny mpizara mandriva, niaraka tamin'ny kde tao amin'ny fitantanan-draharaha, dia zavatra tena nanaitra ahy izany, hatramin'ny roa taona lasa izay. ny zavatra tsara dia miandry ahy foana ny ctrl + alt + f [2-6] 🙂
Ary ny tena tiako dia rehefa azonao atao ny mandika ny lahatahiry / sns hafa ary mampita izany amin'ny distro hafa, na ny trano iray azo zaraina eo amin'ny distro maro ary tena io (trano) io. na inona na inona preferences na fanatisme mety ananantsika tsirairay satria rehefa avy eo dia manohy mampiasa GNU \_ LinuX isika.
Valio ny mandalo eto
Ity dia lahatsoratra fotsiny fa tsy fanehoan-kevitra, ha. Manaiky aho fa ampiasaina kokoa ny fitendry, mahomby kokoa.
Tsy fantatro fa azo apetraka ao amin'ny Arch ny Unity, fa tsy hitsapa azy aho, heh.
Tarkin88 dia hoy izy:
Salama, manao ahoana ianao @ fandalovana eto, tiako ho fantatra hoe inona no fomba na dingana nataonao mba hametrahana firaisan-kina ao amin'ny Arch ary tiako ny hanandramana azy, fa ny ubuntu dia manome ahy hadisoana ao amin'ny Efi ahafahan'ny Arch izay tsy mbola nanao tamiko mihitsy, raha tsy hiteny hoe distro tiako io. , fa amin'izao fotoana izao dia mandalo krizy momba ny maha-birao ahy aho: Eny, miandry ny valinteninao na rohy iray aho, arahaba!
Valiny tamin'i Tarkin88
Salama, raharaha fotsiny ny fanarahana wiki, https://wiki.archlinux.org/index.php/UnityAzonao atao ny manao azy amin'ny fomba roa, raha manangona ianao dia mitaky fotoana sy gig ny habaka roa, fa azo atao ihany (taloha kelin'izay dia tsy nisy repos ho an'ny x64 ary nisy ny ayatana 🙂)
Mbola mieritreritra aho fa mandra-pivoakan'i Consort miaraka amin'i SolusOS PISI dia tsy hahita mpisolo tsara an'ny Gnome 2 taloha isika.
Tena tsara io tetik'asa io. Raha mahavita mametraka azy io araka ny noeritreretiny izy ireo, dia tsara raha navoakan'izy ireo izany mba hahafahany mampiasa azy io amin'ny distro hafa, fa piano piano kosa avelantsika handalo ny dingana araka ny tokony ho izy.
Mahatsapa aho fa ilay safidin'ny birao no navelan'ny vondron'asa Gnome nijanona ary tsy nifantoka afa-tsy tamin'ny efijery sy 3D.
Eny, hoy i Ikey, ny solosaina dia tsy ho an'ny SolusOS irery, fa hifanaraka amin'ireo distro rehetra izay manana GTK3.6
Slackware + kde miasa tsara !!
Ho ela velona kamo !!!!
Ho ela velona !!! mamihina ny kamo kamo.
Slackware + KDE = Milamina tsara!
Aza miady hevitra intsony amin'ny DE. Atsaharo ny fanaingoana ary manomboka miasa.
Ho ela velona Slack
Avy eo dia lazain'izy ireo fa vitsy ny Slackers!
Isan'andro dia tiako kokoa ny Slackware.
Tsy hoe vitsy ny Slackers, heveriko fa ny fiaraha-monina dia tsy dia hita toa an'i Ubuntu, Fedora na ny distro rakotra, amin'ireo tranonkala toa ny LinuxQuestions dia afaka mahita kely ianao.
Mampalahelo fa, ny hakamoana amin'ny google, tsy fantatro vondrom-piarahamonina Slackware amin'izao fotoana izao amin'ny teny Espaniola izay malalaka, any ivelany misy tranokala roa na telo avy amin'ny firenena sasany fa tsy misy amin'ny ankapobeny.
Ny zava-drehetra dia resaka tsiro sy filàna ary raha ny tena manokana dia nanao tsara be tamin'ny Kubuntu 12.10 aho, tsy dia tamin'ny Chakra, Mageia, OpenSUSE, Sabanyon ary Ubuntu satria tsy afaka nampifanaraka azy ireo tamin'ny asako aho.
Nahita an'i Pear Linux (naka tahaka ny MAC) aho ary nanandrana azy tamin'ny kinova 5, avy eo 6 ary farany 6.1 nilaozako satria nisedra ny hafa aho tamin'ny KDE.
Saingy niverina nitady azy aho izao ary nampidina ny alpha an'ny pear 7 64 ary tiako ny hanome azy tsiro, satria miaraka amin'ny zavatra ilainao rehetra ary haingana dia haingana izy io, hany ka tsy afaka mampiasa Kubuntu intsony aho.
Tena tiako ilay lahatsoratra .. sy ny hevitra betsaka ..
Raha mihodina tsara isika dia mahita traikefa, tsiro ary fampiharana ... miankina amin'ny zavatra tianao hatao amin'ilay milina ...
Tsara ny miady hevitra momba ny fanatsarana hitantsika amin'ny tontolo iray na amin'ny tontolo hafa, saingy eo ambanin'ny hevitra foana fa izay mety na mety amin'ny olona iray dia tsy ho an'ny mpiara-miasa amintsika foana.
Vao 3 volana teto amin'ity izao tontolo izao ity aho .. .. ary tokony hiaiky aho fa nahatsiaro ho tsy afa-po tamin'ny safidy momba ny tontolo iainana natolotra ahy ... satria misy foana ny zavatra tsy ampy na mihoatra (arak'ireo masonkarena ireo) .. ..ary ny zavatra azo ampiharina indrindra ho ahy sy ny fomba fiasako..Nahafapo ahy ny ArchLinux niaraka tamin'ny OpenBox .. ..ary azo antoka ho an'ny olon-kafa tsy mampahazo aina, mahafinaritra na mahomby ny mampivoatra amin'ny solosain'izy ireo ..
Amin'ny faran'ny andro dia manana fahalalahana misafidy isika .. ..ary izany no zava-dehibe indrindra .. ..tohanay ny hevitra hoe afaka mizara izay ananantsika .. ary afaka manana an'io karazany maro io eo am-pelatananay .. 😉
Avy sahady dia misaotra betsaka ..
hatsiaka dia hoy izy:
Ny pear dia, tsy manafintohina anao, dika mitovy amin'ny fanabeazana fototra miaraka amina fanampim-panazavana maro, fa mandeha mivantana izy ireo hihaona amin'ny HIG natolotry ny ekipa fanabeazana fototra ary ampiasain'izy ireo nefa tsy manome voninahitra izany.
Mamaly an'i froodo
Indraindray isika dia manadino ny fomba fiasan'ny LXDE tena tsara. Rehefa avy nandalo ny Gnome 2, Shell, KDE ary XFCE; nahagaga ahy izany.
Marina, tsara ny LXDE ary mbola ampiasaiko amin'ny PC desktop-ko Debian izany, ary mirona ho marin-toerana kokoa noho ny tontolo iainana hafa.
Azafady fa tsy miombon-kevitra kely aho, mampiasa ny Fedora amin'ny GNOME aho ary ho ahy tsara izany, ny hevitro fotsiny, tsy an'ny an'ny maro na an'ny an'ny mpampiasa vitsy, saingy mieritreritra aho fa tsy izaho irery no mpampiasa GNOME misy olona maro liana amin'ny GNOME 3, tsy isika rehetra no nampiasa Linux nandritra ny taona maro ary tsy isika irery no hampiasa azy io. Indraindray.
Mpitsara 8) dia hoy izy:
Ampiasao ny XFCE dia ho voavonjinao ireo olana rehetra lazainao ireo.
Azonao atao ny mampiasa Xubuntu raha tianao ny Ubuntu, Linux Mint Debian Edition raha tianao ny zavatra manara-penitra sy akaiky kokoa an'i Debian, saingy mora ny mametraka sy manamboatra. Ary, mazava ho azy, azonao atao ny mampiasa ny Debian ary mametraka XFCE ary tsy tokony hamerina hamerina ny rafitra fiasanao intsony ianao. 😉
Salu2 an'ny jeSuSdA 8)
Valio ny jEsuSdA 8)
Manadino zavatra ianao, tena marin-toerana.
Ary azo ovaina tsara izy io, ary atambatra (ohatra) amin'ny Compiz, Cairo-Dock, Conky… ary miaraka amina sary an-tsaina maro an'isa dia mety hihoatra ny KDE na Gnome mora foana izy io.
Saingy ny fetra dia ao anatin'ny iray ary raha ny fisainanao no jerena
Tiako i mageia satria izy no mpandova an'i mandriva, izay distro malalako foana rehefa nofy ratsy ny VGA AMD-ko, zavatra tsy misy dikany io, saingy ny tena marina dia mbola alpha, beta-flavour, na dia ao amin'ny kininina milamina aza
Heveriko fa hanana ny fahamatorana ilaina izy rehefa mivoaka ny kinova fahatelo, ary heveriko fa fantatr'izy ireo fa mety ho laharana faha-3 izany, ary izany no antony nanitaran'izy ireo ny fe-potoana fitsapana kely kokoa ... 17 (f18, tsy azo raisina fotsiny, tsy miovaova, buggy shit)
ROSE dia hoy izy:
Ny lOSSA ROSA no distro izay nanomboka ny doka Linux malaza sy malaza. Raha tsy nanandrana ianao dia omeko azy ... dia tantarao ny zavatra niainanao!
Valiny amin'i ROSA
Efa ela aho no tsy nandre an'i Rosa.
Ny famerenana amin'ny pejy ofisialin'ny tetikasa ao amin'ny 3, 2, 1 ...
ROSA Linux dia tena tsara, ilay zavatra ratsy tsy resahina ao amin'ireo faritra ireo ...
Manana fandaharana ampy ve ao amin'ny trano fitahirizany i Rosa Linux? , Azonao atao ve ny mametraka programa toa ny FreeCad?.
Fedora dia distro mahatalanjona raha mbola ampiasaina amin'ny KDE, ny sisa amin'ireo tontolo iainana manokana dia tsy tiako intsony xD
Ny fanandramana ny Fedora 18 miaraka amin'ny tontolon'ny birao MATE, dia mifanentana amin'ny olona nostalgika antsika, ary ho antsika izay avy any Ubuntu ary fony Debian no Debian. mahafaly
Matetika ny adihevitra toy izao dia aroso, izay tsy ahafahana mamorona fehin-kevitra mihoatra ny foto-kevitra. Samy manana ny tiany ny tsirairay ... ary mifototra amin'izany dia manameloka ireo safidy hafa. Ary izany, na inona na inona fahalalana ananany an'ilay mpaneho hevitra.
Raha ny amiko dia manana ny olana aho fa tsy tiako ny zavatra maro ataon'ny Ubuntu, fa, hatreto ... ny distro no manome ahy aretin'andoha kely indrindra, mandritra ny taona maro ary na eo aza ny zava-misy dia manome fotoana matetika amin'ny distros aho. toa an'i Fedora. Noho izany dia ekeko ho toy ny ratsy kely kokoa izy io. Izaho koa dia iray amin'ireo izay faly tamin'ny làlana nalehan'i Gnome, izay ny fitsikerana dia manana ny kinova 2 foana ho fiaviany farany, zavatra iray izay tokony ho lany andro ho toy ny an'ny "paleolithic" tamin'ny vanim-potoana taorian'ny PC. Tsikelikely izy ireo dia manamboatra manontolo, tsy misy varavarana mihidy noho ny fanitarana. Raha tsy mandeha lavitra intsony, ny kinova 3.8 manaraka dia hanisy fanitarana ho an'ny traikefa mitovy amin'ny Gnome 2…. mitovy amin'ilay Mint voalohany talohan'ny fampivoarana an'i Cinamon.
Raha fintinina dia maro ireo mankasitraka ny ekipan'ny Gnome ary matoky vokatra iray izay mihamitombo hatrany.
Algiers Alfaro dia hoy izy:
Mahaliana ny INFO…. Aleoko ny Fedora miaraka amin'ny KDE… Ny KDE no biraonao izay mifanaraka amiko indrindra ary ilay hitako fa azo namboarina indrindra… miaraka amin'ny lesoka toy ny rehetra fa io no tiako indrindra 😀
Valiny tamin'i Argel Alfaro
Julius dia hoy izy:
Efa nanandrana ny zava-drehetra aho, nanomboka tamin'ny KDE aho, avy eo Gnome Shell, Mate, ary farany Unity miaraka amin'ny Ubuntu 12.10 sy beta 13.04 (ireo andro ireo)
Farany mifikitra amin'ny Unity aho. Gnome Shell sy Unity no birao miasa be indrindra izay notsapako, fa amin'ny farany kosa ny Unity dia manararaotra tsara kokoa ny sehatr'asa, manome ny fampiharana tsara kokoa ary mitovy endrika sy mamokatra toa an'i Gnome Shell ihany amin'ny lafiny iray hafa. Andao atao hoe hitako ny Firaisankina matotra kokoa sy mifantoka kokoa.
Mamaly an'i Julius
p0f dia hoy izy:
Heveriko fa amin'ireo voalaza ireo, fa tsy ireo misy, i mageia dia mandray ny loka rehetra amin'ny installer, indrindra raha ampitahaina amin'ny Fedora 18 (maharikoriko ny zavatra nataon'izy ireo tamin'ny zavatra tena tsara), ary ampitahaina amin'ny debian Na dia feno tanteraka aza izy io, ho an'ny vao teraka dia tsy dia mahafinaritra loatra.
Ho an'ny ambiny, azoko lazaina ... fa ny mageia dia milamina kokoa noho ny Fedora amin'ny resaka fanavaozana, ary azo takarina izany, satria tsy manana ny farany indrindra izy ireo, Debian dia tsena hafa, hira iray hafa, natao ho an'ny mpizara, Ubuntu, Fedora na mageia tsy azo ampitahaina aminy. Debian, noho izany dia tokony hiresaka momba ny slackware na CentOS isika.
Raha ny fantatro momba ny Fedora, azoko lazaina aminao fa isan'andro dia ratsy kokoa ny kalitaon'ireo fonosany, isan'andro dia ampirisihina bebe kokoa izy ireo handefa zavatra amin'ny fanjakana alpha na beta ary miaraka amin'ireo bibikely fanta-daza, ny marina ... dia mamela zavatra maro irina.
Valiny amin'ny p0f
Andrelo dia hoy izy:
Tsy takatra ny momba ilay lahatsoratra, eny, ny mikapoka an'i Gnome-Shell, mandeha amin'ny zavatra asehony ... Izao dia hita fa i KDE no tian'ny mpiara-monina ... nitaraina izy ireo voalohany fa narary andoha ny Linux hametraka ... Mandroso aho ary ankehitriny miaraka amina shell-gnome dia tsy mandrindra loatra ianao, mitaraina ihany koa izy ireo ... na izany na tsy izany dia tsy misy linuxero faly ... ary manontany tena izy ireo avy eo hoe maninona no misy bilaogy Linux "vitsy" amin'ny teny espaniola
Valiny tamin'i Andrelo
Efa nandramako anao hatramin'ny Ubuntu 8 sy mandriva 2009, hatramin'ny nivoahan'i Mageia dia tsy fantatro ny antony isaky ny manomboka manao fitsapana aho dia any Mageia no hiafarako. Izaho dia manana kinova 3 napetraka ary mandeha tsara, ny zavatra hitako fotsiny dia somary miadana izy rehefa manomboka (heveriko fa olana momba ny KDE izany) fa ny ambiny kosa tonga lafatra, azo ovaina, azo antoka, haingana, tsy afaka mangataka bebe kokoa ianao . Ary ny iray amin'ireo tombony hitako dia ny vanim-potoanan'ny fanamboarana azy. Tsy mila manova kinova isaky ny enim-bolana aho .. ..
Saingy misy olona maro tsy tia ny KDE. Aleoko ny birao maivana na dia tsy dia tsara tarehy aza. Ankehitriny tsy miala amin'ny linux mint MATE aho.
Firmware, ny nofy ratsy Fizarana 4: Fifaninanana famonoana akoho
Package Converter: ny fomba fanovana fonosana amin'ny alàlan'ny interface graphique